ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ ပူတင် တွေ့ဆုံမှုက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ရုရှားအရေးပါမှုကိုပြတာလို့ အကဲခတ်တွေသုံးသပ်
ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ ပူတင် တွေ့ဆုံမှုက ကိုရီးယားကျွန်းဆ...
25 เม.ย. 2562 - 14:35 น.
ရုရှား- မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်သီးပွဲမှာ နျူကလီးယားဖျက်သိမ်း ရေးဆွေးနွေးမယ်လို့ ရုရှားကပြော
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင် တို့ နှစ်ဦးဟာ ပထမအကြိမ် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး မှာ ရုရှားက အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာလို့ အကဲခတ်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဖျား ပစိဖိတ် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့နားက ရုစကီး ကျွန်းမှာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးဟာ ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ တွေ့ဆုံ ပြီး မီဒီယာတွေ ရှေ့မှောက်မှာ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီထိပ်သီး နှစ်ဦး တွေ့ဆုံမှုမှာ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေး ဆွေးနွေးမယ်လို့ ရုရှားရဲ့ ကရင်မလင် သမ္မတ ရုံးက ကြေညာထားပါတယ်။ မစ္စတာ ကင်ဘက်ကတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားဆီက အကူအညီရဖို့ ပြောဆိုဖွယ် ရှိပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ဟနွိုင်းမြို့တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ နျူကလီးယား အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းမရ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ပူတင်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကင်ဂျုံအွန်း ရုရှားမှာ ရောက်နေ
ထရမ့်-ကင် ဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီမှု မရဘဲ အဆုံးသတ်
အခု ရုရှား သမ္မတနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တို့ တွေ့ဆုံပွဲရဲ့ အဖွင့် မိန့်ခွန်းမှာတော့ ထိပ်သီး နှစ်ဦးဟာ နှစ်နိုင်ငံကြားက သမိုင်းချီ ကြာမြင့်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ တင်းမာမှုတွေ လျှော့ချရေး ကူညီချင်တယ်လို့ မစ္စတာ ပူတင်က ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းဟာ ဧပြီလ ၂၄ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက ရုရှားကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သူ့ကို ရုရှား တာဝန်ရှိသူ အရာရှိ တွေက နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ထိပ်သီးပွဲ ကျင်းပနေတဲ့ ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့နားက ရုစကီး ကျွန်း
မြောက်ကိုရီးယား-ရုရှား ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း ဘာတွေ သိထားလဲ
ရုရှားသမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒီမီထရီ ပက်စကော့ဗ်ရဲ့ အဆိုအရ လတ်တလောမှာ ရပ်တန့်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးအရေး ၆ နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲကသာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး အတွက် တစ်ခုတည်းသော ထိရောက်မှုအရှိဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ရုရှားဘက်က ယုံကြည်ထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ ၆ နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲက ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ အပြင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှားနဲ့ အမေရိကန်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာပါဝင်နိုင်တဲ့ အခြား ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်း မရှိဘူးလို့ မစ္စတာ ပက်စကော့ဗ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
"အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကိုရီးယား အရေး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အခြားနည်းနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်၊ ဒါတွေက ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံကြား ပြဿနာကို ပြေလည်စေဖို့နဲ့ နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေးကို ရှေးရှုနေသရွေ့တော့ ကြိုးစားမှု မျိုးစုံက အကျိုးရှိပါတယ်" သူက ဆိုပါတယ်။
ထိပ်သီးပွဲ ကျင်းပတဲ့ နေရာပြ မြေပုံ
ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးက ဘာတွေ အလိုရှိနေလဲ
မစ္စတာကင်နဲ့ မစ္စတာ ပူတင် ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ဟာ ပြုံယမ်း အစိုးရ အတွက် မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အနာဂတ် စီးပွားရေးကို အမေရိကန် အပေါ်ပဲ အားကိုး နေဖို့ မလိုဘူး ဆိုတာကို ပြသရာ ရောက်ပါတယ်။ ရုရှား အစိုးရ အတွက်လည်း ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် အရေးမှာ သူတို့ အနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ခေါင်းဆောင် ကင် အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ရုရှား က ကူညီ ဖိအား ပေးဖို့ တောင်းဆိုဖွယ် ရှိပါတယ်။
ရုရှား သမ္မတ ပူတင်ဟာ မြောက်ကိုရီယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံဖို့ အရင်ကတည်းက ဆန္ဒ ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယားမှာ နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သွားမှာကိုတော့ ရုရှားဟာ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် နည်းတူ လိုလိုလားလားတော့ မရှိပါဘူး။
ရုရှားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံဟာ စစ်အေးခေတ်တုန်းက ကွန်မြူနစ် မဟာမိတ် အဖြစ် စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကွန်မြူနစ် အလွန် ရုရှား အစိုးရနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးက နည်းပါးသွားခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားဟာ တရုတ်နိုင်ငံကိုသာ အဓိက မဟာမိတ် အဖြစ် မှီခို နေရပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ကျည်ကာ ရထားကြီးနဲ့ ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့ကို ကင်ဂျုံအွန်း ရောက်ရှိလာခဲ့
อัลบั้มภาพ ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့ ပူတင် တွေ့ဆုံမှုက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ရုရှားအရေးပါမှုကိုပြတာလို့ အကဲခတ်တွေသုံးသပ်